कपाल नभएर तनावमा हुनुहुन्छ ? गर्न सकिन्छ कपाल प्रत्यारोपण – Etajakhabar
कपाल नभएर तनावमा हुनुहुन्छ ? गर्न सकिन्छ कपाल प्रत्यारोपण
डा. आयुष्मान घिमिरे छालारोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ आवरण स्किन एन्ड हेयर क्लिनिक
कपाल हामी सबैको सौन्दर्यको प्रतीक हो । कपालको सुरक्षा गर्न सकिएन भने सौन्दर्यमा ह्रास आउन सक्छ । त्यसैले सबैले आफूअनुकूल कपाल बनाउने गर्दछन् । कतिपय भने कपाल नपलाउने, झर्नेजस्ता समस्याबाट चिन्तित छन् । कपाल नभएकै कारण २४ महिना नै टोपी लगाएर टाउको छोपेर हिँड्ने पनि धेरै छन् । यस्ता समस्या समाधानका लागि कपाल नभएको ठाउँमा कपाल रोप्ने प्रविधि आएको छ । सर्जरीका माध्यमबाट कपाल प्रत्यारोपण गर्दा मानिसलाई बेहोस बनाउनु पर्दैन । कपाल निकाल्ने र प्रत्यारोपण गर्ने भागमा लोकल एनेस्थेसिया दिएर प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ र बेहोस गर्नुपर्दैन । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
कपाल प्रत्यारोपणअगाडि आफ्नो सामान्य स्वास्थ्यजाँच गराउनुपर्छ ।
प्रत्यारोपण गरिएको कपाल ४८ देखि ७२ घन्टापछि बढ्न सुरु गर्छ । तर, एक–दुई महिनामा ८०–९० प्रतिशत कपाल झर्न सक्छ । त्यसपछि पलाएको कपाल दीर्घकालीन हुन्छ । करिब एक वर्षभित्र कपाल बाक्लो भएर आउँछ र मुण्डन गरे पनि फेरि कपाल पलाइरहन्छ । कपाल प्रत्यारोपणपछि सामान्य असरहरू देखा पर्न सक्छन् ।
जस्तो– कुनै औषधिप्रति एलर्जी हुने, चिन्ता बढेजस्तो महसुस हुने, हल्का रगत जानेजस्ता सामान्य समस्या देखा पर्दछन् । शल्यक्रियापछि कपाल रोपिएको क्षेत्रमा हल्का दुखाइ महसुस हुन सक्छ, जुन व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्छ । आँखा र निधार केही सुन्निने हुन सक्छ । यो बिस्तारै कम हुँदै जान्छ । यसले दिमाग र स्वास्थ्यलाई केही असर पर्दैन ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कार्तिक २५, २०७४ समय: १२:००:३७